Day Club များသို့… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » Day Club များသို့…
Day Club များသို့…
Posted by voice on Oct 14, 2009 in Community & Society, Critic, Education, Entertainment, Relationships & Family, Society & Lifestyle |6comments
Day Club များသို့ ၁၈ နှစ်အောက်လူငယ်များ သွားရောက်နေမှုအပေါ် မိဘများစိုးရိမ်
(Weekly Eleven Journal – Eleven Media Group)
Day Club များ ရန်ကုန်မြို့ လူစည်ကားရာနေရာများ၌ လွန်ခဲ့ သော ၂၀၀ဝပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်၌ စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် Day Club များ အားလုံးရပ်ဆိုင်းပိတ်ပစ်ခဲ့ရကာ ၂၀၀၈ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလဝန်းကျင်မှ စတင်၍ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လာ ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
Day Club များမှာ ရန်ကုန် မြို့လူစည်ကားရာနေရာဖြစ်သည့် ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ကန်တော်ကြီး ဥယျာဉ်အတွင်း၌လည်းကောင်း၊ ဒဂုံမြို့နယ် ပြည်သူ့ဥယျာဉ်အတွင်း ၌လည်းကောင်းဖွင့်လှစ်ထားကြောင်း သိရှိရသည်။
ဖွင့်လှစ်ထားသော Day Club များမှာ နံနက် ၁ဝနာရီမှ ညနေ ၅ နာရီဝန်းကျင်အထိဖွင့်လှစ်ထားသ ဖြင့် ကျောင်းတက်ကျောင်းဆင်းချိန် နှင့် တိုက်ဆိုင်နေသဖြင့် သွားရောက်သူ လူငယ်၊ လူရွယ်အများစုမှာလည်း ကျောင်းနေအရွယ်များဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ီပေ ဃူကဘ များသို့သွား ရောက်ဖူးသူ လူငယ်တစ်ဦးက ပြော ကြားခဲ့ပါသည်။
”ကျွန်တော်ကတော့ Day Club ကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စုပြီး တစ်လတစ်ခါလောက်တော့သွားဖြစ် ပါတယ်။ လာတဲ့အရွယ်တွေ အများ စုကလည်း မိဘအုပ်ထိန်းမှုအောက် ကမလွတ်သေးတဲ့ အသက် ၁၂နှစ် ကနေ ၁၈နှစ်အရွယ်ကျောင်းနေအ ရွယ်လူငယ်လူရွယ်တွေများပါတယ်” ဟုအသက်၂ဝအရွယ်ရှိ လူငယ်တစ် ဦးက ပြောပါသည်။အဆိုပါ Day Club များသို့ သွားရောက်သူ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများမှာ ကျောင်းမတက်၍ သော်လည်းကောင်း၊ အပန်းဖြေဥ ယျာဉ်များ၌ သွားရောက်ဆော့ကစား ခြင်းစသည့် အကြောင်းပြချက်အမျိုး မျိုးဖြင့် အုပ်ထိန်းသူမိဘများကို အကြောင်းပြကာ သွားရောက်လေ့ ရှိနေကြောင်း သိရှိရသည်။ထို့အတူ သွားရောက်လေ့ရှိ သည့် ကျောင်းနေအရွယ်လူငယ် များနှင့်စည်းကမ်းကြီးသော အုပ် ထိန်းသူမိဘများ၏ သားသမီးများ မှာ Day Club ပိတ်ချိန်အိမ်ပြန်ရာ ၌ အဝတ်အစားတစ်စုံစီအပိုယူလာ ပြီး အဝတ်အစားလဲလှယ်၍ အိမ် သို့ပြန်လေ့ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
Day Club ကိုလာတဲ့ လူငယ်တွေက Club ဖွင့်ချိန်၁ဝ နာရီ တောင်မထိုးသေးဘူး၊ အောက်မှာ စုရုံးစုရုံးနဲ့ အစောကြီးရောက်ရှိနေ ပါတယ်။ တချို့လူငယ်တွေကြတော့ လည်း မွန်းတည့်၁၂ နာရီကနေ ၁နာရီအတွင်းအများဆုံးလာကြပါ တယ်။ ကျောင်းကနေ Club ကိုလာ တဲ့ လူငယ်တွေဆိုရင် တစ်နေရာရာ မှာ အပြင်အကျီလဲပြီး Club ထဲကို လာကြပါတယ်။ ပြန်တော့လည်းသူ တို့က မူလအတိုင်းဝတ်လာတဲ့အ ဝတ်အစားတွေကို အိမ်သာထဲနဲ့ကား ထဲတွေမှာပြန်လဲပြီး အိမ်ကိုပြန်ကြ ပါတယ်။
အချို့မိန်းကလေးတွေဆို ရင်လာတုန်းက မိန်းကလေးသူငယ် ချင်းစုစုပေါင်း ၅ယောက်လာတယ်။ Club ထဲမှာအချိုရည်(သို့မဟုတ်)စိတ် ရစ်ထွေပြားစေတဲ့ အခြားအရည် တွေသောက်ပြီးပျော်မြူးကြတယ်။ တချို့ကြတော့လည်း စီးကရက် လေးတွေဖွာပြီး ပျော်မြူးနေကြပါ တယ်။ အဲဒီအထဲမှာပဲပျော်မြူးနေ ရင်းနဲ့တခြားသူစိမ်းအမျိုးသားတွေ နဲ့ရင်းနှီးပြီးပြန်တဲ့အခါမှာ မိန်းက လေးသူငယ်ချင်းစုစုပေါင်းငါးယောက် ကနေ စုစုပေါင်း၁ဝယောက်ဖြစ် သွားပြီး Club ကနေအပြန် အခြား နေရာတွေကို ဆက်လက်ခြေဆန့် တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်”ဟုအသက် ၂ရအရွယ်ရှိအမျိုးသားတစ်ဦးက ဆက်လက် ပြောကြားခဲ့သည်။
အလားတူ Day Club များ အပြန်၌ သူစိမ်းမိန်းကလေးနှင့် သူ စိမ်းအမျိုးသားတို့ ခင်မင်ရင်းနှီးမှု များဖြစ်ခဲ့ပြီး ဃူကဘ အတွင်း၌ အခန်းငယ်လေးများတွင်ရင်းရင်းနှီး နှီးပွေ့ဖက်ခြင်းလည်းကောင်း၊အပြန် ၌အခြားနေရာများသို့ ခြေဆန့်ခြင်း လည်းကောင်း၊ အချို့မှာမူ ဆက် သွယ်ရန် email, phone နံပါတ် များရယူ၍ နောက်ပိုင်းတွင်ခင်မင်မှု ရရှိကာ အခြားနေရာများတွင်ချိန်း ဆို၍ မိမိအသက်အရွယ်နှင့် မသွား သင့်သည့်နေရာမျိုး သွားသူများ လည်းရှိနေကြောင်း သိရှိရသည်။ ”ကျွန်တော်ကတော့ ကန် တော်ကြီးအဝင်အထွက်ပေါက်မှာ အငှားယာဉ်မောင်းပြီးစီးပွားရှာနေတာ ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်လောက်ကဆို ရင် ကောင်လေးတစ်ယောက်က အိမ်ပြန်ဖို့ Taxi ငှားတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီကောင်လေးက ကားပေါ်မှာပဲ ဆေးလိပ်သောက်တယ်။ သူ့ကို ကျွန် တော်က ဘယ်နှတန်းရောက်ပြီလဲ မေးတော့ ၆တန်းတက်နေတယ်လို့ ဖြေပါတယ်။ နောက်တစ်ခါကြုံရ တာကမိန်းကလေးက ၁၆နှစ်အရွယ် လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ သူနဲ့တွဲလာ တဲ့ကောင်လေးက ၁၈နှစ်လောက်ပဲ ရှိသေးပါတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့နှစ် ယောက်စလုံးကမူးနေကြတယ်။ ပို့ ခိုင်းတဲ့နေရာကလည်း ဖိုးစတား၊ ဖိုက်စတားအဆင့်ရှိတဲ့ နေရာတစ်နေ ရာပို့ပေးပါလို့ ပြောပါတယ်။ ကျွန် တော်က အငှားယာဉ်မောင်းဖြစ် တယ်။ Customer သွားချင်တဲ့နေရာ ကိုပို့ပေးရတာပါ။ တားပိုင်ခွင့် လည်းမရှိပါဘူး။ နောက်ဆုံးပြော ချင်တာကတော့ အုပ်ထိန်းသူမိဘ တွေလိုအပ်ချက်ရှိသလို လူငယ် လူ ရွယ်တွေအနေနဲ့လည်း ခေတ်နဲ့အညီ အတုယူပြောင်းလဲသင့်တဲ့ ရေစီး ကြောင်းတွေမှားနေတယ်လို့ ထင်ပါ တယ်”ဟုတက္ကစီယာဉ်မောင်းတစ် ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
Day Club အများစုသည် စီပွားရေး ပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်သော် လည်း လူမှုရေးအရ ကိုက်ညီမှုမရှိ သည့် ၁၈နှစ်အောက်ကျောင်းသား၊ လူငယ်များကို ဝင်ရောက်ခွင့်မပြု သင့်ကြောင်း ကျောင်းသားမိဘများ က ဆိုပါသည်။ ”ကျွန်မတို့က အပြင်ကိုသွား ရင်းနဲ့ ကျောင်းနေအရွယ်ကလေး တွေက ဟော့ရှော့ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ အဲဒီ အဆောက်အအုံကို အဝင်အထွက် ပြုနေတာတွေ့ရလို့ အနားပတ်ဝန်း ကျင်ကလူတွေကို မေးကြည့်တော့ အဲဒီဟာက Day Club လို့ပြော တယ်။ တချို့လူငယ်မိန်းကလေး တွေဆိုရင် အရမ်းကိုပေါ်လွင်စေတဲ့ အဝတ်အစားဒီဇိုင်းတွေကို တွေ့ရ တယ်။ ဒီအခြေအနေတွေကိုမြင် လိုက်တော့ အရမ်းစိုးရိမ်စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ အဲဒီအရွယ်တွေရှိတဲ့ ကလေး၂ ဦးရဲ့ အုပ်ထိန်းသူဖြစ်နေ လို့ပါ။ ကျွန်မတို့ရဲ့မျက်ကွယ်မှာ ဒီလိုနေရာတွေမျိုးသွားနေမှာကို အရမ်းစိုးရိမ်မိပါတယ်။ ဒီလိုနေရာ မျိုးတွေများလာလို့ ကလေးတွေကို ထိန်းမနိုင်ဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ် ရမလဲ။ ကလေးတွေရဲ့အနာဂတ် စိုးရိမ်စရာနေရာတစ်ခုလို့မြင်မိပါ တယ်”ဟု အသက် ၁ဝ နှစ်အရွယ် နှင့် ၁ရနှစ်အရွယ်ရှိ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတို့၏ မိခင်တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
အ.ထ.က(၄)အလုံမှ ကျောင်း အုပ်ဆရာမကြီးဒေါက်တာသက် သက်စံက”၁၈နှစ်အောက်ကလေး တွေဆိုတာ သူတို့ကိုသူတို့ ဃသညအမသူ မလုပ်နိုင်သေးတဲ့အရွယ်တွေပါ။ ကလေးတွေအနေနဲ့ ခေတ်ရဲ့ရေစီး ကြောင်းတွေအရ အချိန်မရွေးပျက် စီးမှုလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ရှိသွား နိုင်ပါတယ်။ သူတို့တွေအနေနဲ့ထူး ဆန်းတာတွေ့ရင်သွားချင်မယ်။ ဒီ လိုမျိုးသွားတဲ့အခါမှာ ခေတ်ရေစီး ကြောင်းအရမကောင်းတဲ့ အကျင့် စရိုက်တွေ အရင်ဆုံးကူးစက်လာ မယ်။ ဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင် ကျောင်း မှာ ကလေးတွေအတွက် ခွင့်တိုင် မယ်ဆိုရင် မိဘတွေကိုယ်တိုင်ခွင့် တိုင်မှခွင့်ပေးပါတယ်။ ဒီလိုမှမလုပ် ရင် မိဘတွေကလည်း ကလေးတွေ ကျောင်းသွားတယ်ဆိုပြီး စိတ်ချနေ ကြမှာပဲ။ ဒီပုံစံမျိုးက ကလေးတွေ ကိုကျောင်းကနေတစ်ဆင့်မြန်မာ့ယဉ် ကျေးမှုနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့နေရာတွေ ကိုရောက်ရှိမသွားအောင် ထိန်းသိမ်း တဲ့သဘောပါ”ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
အလားတူ အ. ထ.က (၁) ဒဂုံ ကျောင်းအုပ်ကြီးဖြစ်သူဒေါက်တာ ကိုကိုအောင်ကလည်း Day Club ဖွင့်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ ဘာလုပ်ပေးရ မလဲဆိုရင် ကျောင်းသား ကျောင်းသူ အရွယ်တွေကိုဝင်ခွင့်မပြုဖို့လုပ်ပေး ရမယ်။ သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုတော့ ဘာမှမပြောလိုပါဘူး။ ကျွန်တော် တို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့က ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကအစည်း အဝေးတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်။ အဓိက ကကျောင်းကိုမလာဘူးဆိုရင်အတန်း ပိုင်ဆရာမအနေနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆို တာမိဘတွေဆီကိုဆက်သွယ်စုံစမ်း မေးမြန်းရမယ်။ တချို့ကျတော့ လည်းခွင့်တိုင်ပြီးပျက်တာရှိတယ်။ တချို့ကျတော့လည်းခွင့်မတိုင်ဘဲပျက် တာရှိတယ်။ တချို့မိဘတွေကျ တော့လည်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းရ တာခက်တယ်။ ကျွန်တော်တို့အခု လုပ်မယ့်အစီအစဉ်က ကျောင်းတက် ရမယ့်အချိန်တွေမှာ ပြင်ပမှာ ကျောင်းသူကျောင်းသားလို့ထင်ရ တယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာပညာရေးမှူး ကနေတစ်ဆင့် ဒီကျောင်းသား ကျောင်းသူနောက်ကိုလိုက်ရမယ်။စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပါမယ်။ဒီDay Clubတွေကြောင့်လည်း ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေ လမ်းမှားမရောက် ဖို့ အတတ်နိုင်ဆုံးဆောင်ရွက်သွား ပါမယ်။ မိဘတွေအနေနဲ့ကလည်း မိမိရဲ့ကလေးကိုထိန်းကြပ်မှုပိုလုပ် သင့်ပါတယ်”ဟုပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဥပဒေပညာရှင်တစ်ဦးက ”အခု Day Club တွေကိုသွားနေတဲ့ အရွယ် တွေထဲမှာကျောင်းနေအရွယ်ကလေး တွေပါနေတယ်လို့သိရတယ်။ ဒါက ဥပဒေနဲ့ငြိစွန်းနိုင်တယ်။ ဘယ်လို ငြိစွန်းနိုင်သလဲဆိုရင် အသက်၁၆ နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ ကလေးသူငယ် တွေကို အရက်ရောင်းချတဲ့ အရက် ဆိုင်မှာ ကလေးတွေကို အလုပ် လုပ်ခိုင်းတာ(သို့မဟုတ်)အရက်သောက် ဖို့ ခွင့်ပြုတာတွေက ကလေးသူငယ် ဥပဒေအရ ထောင်ဒဏ်ရောငွေဒဏ် ပါကျခံရနိုင်တယ်။နောက်ပြီး ဒီ Day Club တွေထဲမှာ အရက်ရောင်းနေ တာတွေကြားသိရတယ်။ အဲဒီတော့ သွားတဲ့ ကလေးငယ်တွေအနေနဲ့ အနည်းနဲ့အများသောက်မိဖို့ ရာခိုင် နှုန်းများတယ်။ အဲဒီလိုသောက်နေ တာကိုသိသိနဲ့ ခွင့်ပြုထားသူတွေ အနေနဲ့အရေးယူခံရနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကလေးသူငယ်တွေအကျင့် စာရိတ္တပျက်ပြားစေတာတွေကို လုပ် ခွင့်ပြုတာတွေကလည်း ဥပဒေအရ အရေးယူခံရနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး တွေကို ကလေးသူငယ် ဥပဒေပုဒ်မ ၆၅အရထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ် ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ကျခံ နိုင်ပါတယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ကျောင်းသားမိဘတစ်ဦးက ”ဒီလိုမျိုးနေရာမျိုးတွေမှာ လူငယ် တွေအကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားစေမယ့် အရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကလေးတွေကတော့ လူများတကာ တွေသွားနေတဲ့အသံတွေကိုအဆင့် ဆင့်ကြားပြီးတော့ စူးစမ်းကြပါ တယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း လူငယ်တွေ အနေနဲ့သောက်စားမူးယစ်ပျော်မြူး ရင်းနဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေ ထပ်ဖြစ်မှာစိုးရိမ်ပါတယ်။ ကျွန်မ တို့အနေနဲ့လည်း သား၊ သမီးတွေ အပေါ်ထိန်းသိမ်းမှုက အပြည့်အဝ မလွမ်းခြုံနိုင်ပါဘူး။ ကလေးတွေကို Day Club တွေအနေနဲ့ ပေးမဝင်ဖို့ လိုပါတယ်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းကဲ့သို့ခေတ်ရေစီးကြောင်း အရဖြစ်ပေါ်လာသည့် Day Club များအပေါ် လူငယ်များမျောပါစီး ဝင်မှုနည်းပါးလာစေရန် မိဘများ အနေဖြင့် စိုးရိမ်ပူပန်စွာစောင့်ကြည့် ထိန်းသိမ်းမှုများ လိုအပ်သလို အုပ်ထိန်းသူကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမ များအနေဖြင့်လည်း မိမိတပည့် များ၏အခြေအနေအမှန်ကိုစဉ်ဆက် မပြတ်စောင့်ကြည့်အကဲခတ်ရန် လို အပ်မည်ဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ယခုကိစ္စရပ် အပေါ်အားလုံးကဝိုင်းဝန်းအဖြေရှာ ဆောင်ရွက်သွားသင့်သလို လူငယ် လူရွယ်များအနေဖြင့်လည်း ခေတ် ၏တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုအပေါ်မှ မိမိဘဝအတွက် မည်သည်က အကျိုး၊ မည်သည်ကအပြစ်ဆိုသည် များကို မှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်နိုင် ရန် စဉ်းစားချင့်ချိန်သွားကြရန်လိုအပ်နေမည်ဖြစ်ပါသည်။
Note: Direct copy from http://www.weeklyeleven.com/c001/c001.php?id=2
All credits to Weekly Eleven Journal
View all posts by voice →
ရန်ကုန်ထဲမှာနေပြီး အဲလိုဟာတွေရှိမှန်းကျတော့ အွန်လိုင်းကနေဖတ်မှသိရဲ့အဖြစ်ပဲ.. ဒီလိုဟာတွေရှိတာ မဖြစ်သင့်ဘူး ထင်ပါတယ်.. နိုက်ကလပ်တွေဆိုရင်တောင် ညဘက်ထွက်မရတဲ့ ကလေးတွေအတွက်လုံခြုံဦးမယ်.. ခုတော့ ကျူရှင်တွေကျောင်းတွေလစ်ပြီး အဲလိုတွေသွားနေတာ ဆိုးဝါးလွန်းပါတယ်.. မှတ်ပုံတင်စိစစ်တဲ့ကိစ္စက လုပ်သင့်တယ်ဆိုပေမယ့် မြန်မာတွေထုံးစံအတိုင်း လုပ်လည်းခဏပဲဖြစ်သွားမှာ စိုးတယ်..
လူငယ်ဆိုတေ့ာ စုးစမ်းချင်တဲ့စိတ်နဲ. လုပ်မိကြတာထင်ပါတယ်……. ဒေးကလပ်ဆိုတေ့ာ ရောက်ဖို.လွယ်တာကိုး………
အော်ဒါကြောင့် ပြည်သူ ့ဥယာဉ်ရေကူးကန်နဘေးမှာ လူငယ်တွေ အရှက်ကင်းမဲ့စွာနဲ ့မူးရူးနေကြတာကိုး။
မြင်သူမရှက်ယိုသူရှက် တွေအဲဒီမှာ ရှိတယ်။
မိသားစုနဲ ့ရေလာကစားကြတဲ့ အသက်အရွယ်မရွေးရှိနေတဲ့နေရာမှာရှိနေတော့ မိဘအုပ်ထိန်းမှု ကိုအလေးထားသူ အရှက်ရှိသူများအားလုံး အဲဒီကိုနောက်တစ်ခေါက်ဆို မလာတော့ဘူးလို ့မှတ်ချက်ချသံတွေကြားခဲ့ရပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ထဲမှာဘဲတွေ ့ရတဲ့ အနောက်တိုင်းဆန်ဆန်ဖတ်ရမ်းနမ်းရှုပ်မှုတွေအပြင် …ပြောမပြသင့်တဲ့အပြုအမူတွေကို လူ ၁၀ဝလောက်ဆော့ကစားနေတဲ့ ရေကူးကန်မှာ အုပ်စုလိုက် သောင်းကျန်းနေတာ အရမ်းကို ရုပ်ဆိုးတယ်လို ့ထင်မိပါတယ်။
လူငယ်တွေကတော့ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုလုပ်နေရမှ ကျေနပ်သူတွေပါ
လုံးဝကိုအဖြစ်သင်.တဲ.အရာတွေပါအထူးသဖြင်.ကျွန်တော်တို.လိုနိုင်ငံမျိုးတွေမှာပိုလို.တောင်မဖြစ်သင်.ပါဘူး။ဟုတ်လည်းဟုတ်ပါတယ်အခုခေတ်က12 နှစ် 13နှစ်လောက်ဆိုအတတ်ပေါင်းစုံတတ်နေကြပြီလေတစ်ခါကအဲလိုမလုပ်တတ်တာတောင်ဟားတိုင်ခံရဖူးတယ်ပြောကြသေးတယ်ဗျခေတ်မမှီဘူးတဲ.အမှန်တိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ဆို19နှစ်ထဲရောက်နေပါပြီအဲဒီနေရာတွေဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာလုံးဝမသိပါဘူးနယ်ကလာတာမို.ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ.ရန်ကုန်ရောက်တာ4နှစ်လောက်ရှိရင်ကျောင်းတက်နေတာပါတကယ်ကိုဘယ်မှာရှိမှန်းတောင်မသိပါဘူးအထူးသဖြင်.အဲလိုဖြစ်တတ်တာကရန်ကုန်ကကျောင်းသူကျောင်းသာတွေများပါတယ်အဲဒီနေရာတွေကိုပိတ်ပင်သင်.ပါတယ်အဲဒီသွားမဲ.လူတွေကလည်းလူငယ်တွေပဲအများဆုံးဖြစ်မှာပါဘာ.လို.လဲဆိုတော.ကြီးတဲ.လူတွေကအဲဒီအချိန်ဆိုအလုပ်ခွင်မှာပဲရှိနေတာများပါတယ်ဒီပို.စ်ကိုအရွယ်မရောက်သေးတဲ.လူငယ်တွေဖတ်မိရင်လည်းအသိတရားရပြီးရှောင်ကြဉ်ကြပါလို.တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။